Jumpsuit ho an'ny vao manomboka, fizarana 1 | Avy amin'ny Linux
Jumpsuit ho an'ny vao manomboka, fizarana 1
pandev92 | | fandaharana
Rehefa nanomboka nianatra C # aho dia nanapa-kevitra ny hanomboka ity fampianarana fohy ity, hahafahana mampianatra amin'ny fomba ifotony, ny fampiasana C # sy mono amin'ny Linux.
Ny tanjona dia ny hanome fahalalana fototra ary farany amin'ny fizarana farany farany, hahafahana manome hevitra momba ny fomba fampiharana mono, na amin'ny GTK # na amin'ny Qt 4 hatramin'ny qyoto.
1 Ny fanontaniana voalohany apetraky ny sasany dia: Inona no atao hoe Mono?
2 Inona no azontsika atao amin'ny Mono?
Ny fanontaniana voalohany apetraky ny sasany dia: Inona no atao hoe Mono?
Mono dia sehatra noforonina hanamorana ny mpamorona, ny famoronana rindran-tsampona, tohanan'ny tetik'asa Xamarin.
Izy io dia fampiharana openource an'ny Microsoft.NET, miorina amin'ny fenitra ECMA ho an'ny C # sy ny CLR (ny milina virtoaly izay mitondra ny kaody, ny mpanangona fako, ary ny mpitantana ny loharano).
Mono dia mamela ny famoronana rindranasa ho an'ny Linux, Windows, Osx, iOS, Android, Windows Phone sns…, ary koa ny fampiasana Windows Forms amin'ny Windows, Gtk ary Qt amin'ny Linux, Cocoa amin'ny Osx ho interface.
Mono dia mamela ny fampidirana C #, Visual Basic, Java, Python, Ruby, Eiffel, F # ary fiteny hafa, ao anatin'io programa io ihany. Ny mpamorona C # dia nahazo alalana tamin'ny MIT / X11 sy ny GPL. Ireo fitaovana ambanin'ny lisansa GPL, ny fotoana maharitra, eo ambanin'ny LGPL 2.0, ireo tranomboky eo ambanin'ny MIT X11, ary ASP.NET, MEF, DLR, AJX, eo ambanin'ny Lisansa Microsoft Permissive ary APACHE2.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny patanty ary hanazava azy io satria tsy misy atahorana, dia mijery ilay tranokala mono ihany aho. http://www.mono-project.com/License
Inona no azontsika atao amin'ny Mono?
Afaka mamorona amin'ny fampiharana multiplatform haingana isika, mankany amin'ny tahiry mifandraika amin'ny Mysql, Postgresql sns ..., mankany amin'ny pejin-tranonkala.
Tontolo iainana fampandrosoana
Manana isika izao Monodevelopment , iray amin'ireo IDE feno indrindra ao amin'ny Linux, izay miasa amin'ny Linux, Windows ary Mac OSX.
Izy io koa dia mamela ny fanoratana amin'ny fiteny maro, anisan'izany ny C #, Visual basic.net, C / C ++ ary Vala.
Amin'ity tranga ity dia hampianatra ny fomba fametrahana ny kinova farany ao amin'ny Ubuntu sy ny derivatives aho, amin'ny distros hafa kosa, toa ny Opensuse na Archlinux, ho hitantsika ny kinova farany ao amin'ny trano firaketana ofisialy.
Voalohany, hanampy ny fitoeran-trano izahay
Avy eo hanavao sy hametraka ny tontolo iainana sy ny tranomboky isika
Raha vantany vao tafapetraka ny zava-drehetra, dia tsy maintsy hamerina ilay rafitra isika.
IDE, PROGRAMY VOALOHANY
Hanokatra Monodevelop izahay, avy eo Menu »File» Vaovao »Vahaolana ary hisokatra ny boaty fifampiresahana, antsoina hoe vahaolana vaovao toy izao:
Homena ac #, tetikasa console, ary hampiditra ny anaran'ilay tetikasa izahay ary homena toerana izany ary amin'ny farany dia hanaiky izahay, ary amin'izany dia hosokafana ny Hello World mahazatra sy malaza.
Amin'ity programa voalohany ity dia hahita zavatra fototra roa isika:
1: Ny lahasa lehibe indrindra, izay tsy maintsy atao mba hanatanterahana programa, satria ny mpandika teny dia hitady an'io ampahany io, hanomboka hanatanteraka azy. Amin'ity tranga ity dia tsy mitovy amin'ny fiteny hafa isika fa tsy ilay teny voatokana Main, Manomboka amin'ny sora-baventy ary tsy afaka manao fahadisoana isika satria raha tsy izany dia tsy mandeha ny programa.
2: Ny baiko Console.WriteLine ();
Ity baiko ity dia ahafahantsika mampiseho lahatsoratra eo amin'ny efijery. Ny Console.WriteLine, dia ao anatin'ny namespace "System", araka ny hitanao, ny baiko "using System" dia tafiditra ao amin'ny fiandohan'ny programa.
Console.WriteLine, ahafahantsika mampiseho lahatsoratra, mametraka azy eo anelanelan'ny teny roa, na miovaova, mametraka azy ireo tsy misy teny nalaina.
Farany, hanatanteraka ny programa izahay, ary hamely ny fanalahidy F5.
Ao amin'ny C #, manana karazan-karazany miovaova isika:
int ho an'ny isa manontolo, float ho an'ny isa misy desimaly,avo roa heny ho an'ny isa misy desimaly fa misy marimaritra iraisana roa, Char ho an'ny endri-tsoratra, tady ho an'ny tadin'ny lahatsoratra, bool ho an'ny "Marina" na "diso" ary decimal . (Misy ihany koa ny karazany hafa, fa amin'izao fotoana izao dia tsy ilaina ny mahafantatra azy rehetra, manamboatra ny lehibe indrindra izahay).
Toy izao manaraka izao no ambara:
Raha atao teny hafa: typeVariable variableName = data;
Raha mila fanazavana fanampiny momba ireo karazana dia avelako ho anao ity rohy manaraka ity: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms228360%28v=vs.90%29.aspx
PRINT VARIABLES IN THE TERMINAL
Voalohany dia manambara izahay fa miovaova ao anatin'ny MAIN, ohatra:
Avelako ianao hisambotra.
Ny valin'ny fanatanterahana ny sumTotal miovaova dia hiseho eo amin'ny efijery ny isan'ny fiakaran'ny vidinyOfCoste sy ny miovaova Iva.
Manana fomba roa hanaovana hevitra isika, ny voalohany dia ny fomba mahazatra, ny an'ny fanehoan-kevitra iray andalana ary vita toy izao:
Napetraka eo alohan'ny lahatsoratra izy, bara roa: // Fanehoan-kevitra iray ity
Toy izao manaraka izao ny fanehoan-kevitra marobe:
Ny lahatsoratra dia nialohaloha tamin'ny: "/ *" ary faranana amin'ny "* /"
Avelako eto ity ampahany voalohany ity, amin'ny herinandro ho avy, hiezaka hiresaka lalina kokoa momba ny fampiasana variables aho, hampahafantatra ny raha, mandritra sy ho an'ny fanambarana, ary hanazava etsy ambony hoe inona ireo zavatra, kilasy ary fiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fandaharana » Jumpsuit ho an'ny vao manomboka, fizarana 1
Eny, nametraka programa tsotra amin'ny C # miaraka amin'i mono aho, iray amin'ireo zavatra nanova ahy (ny halako an'i Gtk, amin'ny heriko manontolo), tsy misy toa ny rafitra QT, ary ny iray hafa dia toa ny python fiteny tsara lavitra kokoa, izay mamela ihany koa ny fifindra-monina tena mora eo anelanelan'ny sehatra.
Ankoatr'izay dia tsy maintsy ekeko fa MonoDevelop no iray amin'ireo hevitra tsara indrindra eto amin'ny tontolon'ny fahalalahana, tafahoatra tamin'ny QTCreator fotsiny fa ny fomba fahitako zavatra dia mitaky be dia be, ekeko fa ny c ++ ho ahy dia marary andoha.
Na dia manana ny kinova Pycharm Comunnity Edition aza isika, (izay na dia tsy openource aza dia maimaimpoana, toy ny fisandratana) ho an'ny python ary ny marina dia tena tsara "Python + Pychar + QtDesigner" na "Sublime + Pycharm + QtDesigner" dia mora kokoa miasa miaraka amin'ny MonoDevelop. Tsy lazaina intsony fa Django, Web2Py, dia tsara lavitra noho ny miasa amin'ny mono ny faritra amin'ny tranonkala.
Ny tiako holazaina dia hoe toa hevitra tsara ho ahy raha misy olona manao fandaharana ao amin'ny Visual Studio .Net te-hifindra monina mankany amin'ireo safidy hafa maimaim-poana miaraka amin'i Mono, tsy maninona izany, fa raha misy mpankafy rindrambaiko tsy mivadika izay mianatra programa izao, maninona raha mampiasa sehatra tanteraka? afaka hatramin'ny voalohany toy ny C ++ na Python… Izay tsy miala amin'ny lamaody intsony ary iza no be mpitia isan'andro.
Ankehitriny dia tongasoa ireo fampianarana momba ny fandaharana rehetra, ary izay programmer izay mihevitra ny hanampy ny fiaraha-monina amin'ny fiteny Mono, na amin'ny fiteny hafa, dia raisina an-tanan-droa ihany koa.
Hanova Pycharm ho an'ny Ninja-IDE aho
Tiako + mbola tsy hita ny + Pycharm Ninja Ide, ho an'ny ninja ide dia aleoko i Sublime.
Ny zavatra momba an'i Pycharm dia ny kinova maimaim-poana dia mitovy amin'ny Ninja IDE: /
Pycharm autocompletion dia tsara loatra, refactor kaody ihany koa, tsara ny fampidirana git. Tsy hitako ireo zavatra telo ireo tamin'ny Ninja-Ide na tamin'ny plugins.
Manohitra ny PyCharm dia mampiasa "JAVA" izy, ary mavesatra izany, fa ny eklipsa ihany koa dia mampiasa azy nefa hitanao ny nampiasana azy.
Ankehitriny dia mahita ho avy be ho an'ny Ninja-Ide aho saingy tsy manana endri-javatra maro hampiharina. Fomba fahitako zavatra izany
Azonao atao ny mampiasa mono C # miaraka amin'ny qt soa aman-tsara, amin'ny alàlan'ny qyoto, navelako ilay rohy tao amin'ilay lahatsoratra.
Eny fantatro, araka ny nolazaiko fa tsy manohitra an'i Mono aho, na ny C # dia toa fiteny mora be ianarana. Ary manana làlana iray na iray hafa ankatoavina aza aho, saingy araka ny nolazaiko, misy teknolojia maimaim-poana tanteraka ho an'ny olona iray izay manomboka ao, ary tsy mila sehatra manokana izy ireo.
Miaro betsaka ny python aho, saingy manao ny ambaratonga voalohany amin'ny mari-pahaizana Oracle Java Develop SE, tsotra fotsiny satria misy zavatra tokony hampiana ao amin'ny fandaharam-pianarako, ary satria ny fangatahana ireo mpamorona Java "indraindray" dia tsara any Venezoela. Na dia nitombo be aza ireo DJango tamin'ity taona lasa ity, ary antenaiko fa indray andro any hanokana ny tenako manontolo amin'ny fandaharana.
PS: Admas de Qyoto dia Qt4Dotnet ihany koa ho an'ny c #
PS: Tazomy ireo rohy mankany amin'ny microsoft MSDS. Eto aminao ny antontan-taratasin'i mono: http://docs.go-mono.com/ haha.
Fa amin'ny teny anglisy xd izy ireo
Mono: wedge an'ny Microchot amin'ny sehatra malalaka.
Tsia fa misaotra.
Raha mbola eo ny fanao dia mety hanao valifaty isika EEE, ary afaka afaka C #.
Tsy mety izany ary afaka miombon-kevitra aminao amin'izany aho, fa rehefa manandrana, ohatra ianao, mamorona programa izay miasa amin'ny sehatra rehetra ary mampiasa fiteny fantatra dia tsy safidy ratsy izany.
Ny mpiara-mianatra amiko dia adala Java adala ary tsy te hijery manodidina, avy eo nahita ny C # ary izao dia tia C # ary miteny peste an'i Python ohatra.
Mono dia fomba fiasa fandaharana tokana avy amin'ny sehatra samihafa, hitako fa tsy dia tsara aho satria tsara ilay hevitra ary mandeha izy io, saingy tsy dia tiako loatra ny C #
Na firy na firy no ampiasain'izy ireo ny gidro landy, na ny Mono amin'ity tranga ity, dia mbola faritanin'i Microsoft ihany, novolavolaina tamin'ny tranga voalohany handefasana ny rafitra .NET mankany GNU + Linux.
Tena ilaina ve i Mono mba hampivelatra ireo rindranasa miampita sehatra?
Mazava sy mahery ny valiny: TSIA.
Tsy ilaina izany satria ny karazana fampiharana izay iantefan'ny Mono [b] dia sady tsy chicha no tsy voasarimakirana [/ b]: ny hafainganan'ny C Shit, ny tiako holazaina dia hoe Sharp, over Python, dia misy ifandraisany ihany rehefa mampiasa rindranasa sarotra sy manao fampiasana mahery vaika ny loharano eo an-toerana toy ny HW sy ny base operating system. Ho an'ny * tena * rehetra rehetra misy Python + Qt na, raha miresaka momba ny fandraharahana momba ny raharaham-barotra isika, ilay CamelCase mahatsiravina hafa dia antsoina hoe Java.
Ka raha mila fampiharana mailaka sarotra eo an-toerana isika amin'ny sehatra samihafa, ny hany safidy azo atao dia ny fandaharana milaza fa mihevitra ny toetra mampiavaka ny tontolo iainana izay hiasa sy hampiasa C ++.
Namaky ny lisansa Mono ve ianao? Tsy hoe fanoherana an'i Microsoft fotsiny izany (izay hazavaiko, fantatro hoe inona izany orinasa mahasosotra izany ary manana ny antony hiadiako aho) fa iharan'ny politikany tsy ara-dalàna.
Azonao atao ny manisy kaody ny rindranasa rehetra azonao eritreretina ao amin'ny PythonQt amin'izay, tsy vitan'ny multiplatform fotsiny izy ireo fa na hybrida eo an-toerana / rahona miaraka amin'ny fahombiazany mitovy fa azo refesina tsara kokoa noho ny ambiny amin'ireo safidy hafa.
Ary rehefa manisa ny tsingerin'ny processeur dia ny C / C ++ ihany no soloina.
Fakafakao izany Nano: raha ny akoho NET sy Mono no dokambarotra azy ireo androany dia hivoatra amin'izay ny zava-drehetra, ny zava-drehetra: mpitety tranonkala, mpilalao mozika, takelaka, mpamoaka sary, na inona na inona tadiavinao, raha ny tokony ho izy dia hosoranao amin'ny zavatra rehetra indray mandeha ary ho entinao amin'ny fanovana kely amin'ny sehatra rehetra izany, marina!? Heh, hafahafa tokoa ny tsy fisian'izany intsony ..>: D
Aza avela ho voan'ny bibilava mivarotra fitaratra miloko ianao (iray ny hosotra 'multiplatform').
Izaho dia ao amin'ny tsorakazo PHP ary miaraka amin'i Python dia manana ny famandrihako aho, fanazaran-tena bebe kokoa noho ny teo aloha, fa Python androany dia mamela anao hanao kaody roa eo an-toerana, avy amin'ny fitaovana console, amin'ny alàlan'ny rindrambaiko matanjaka amin'ny tranokala feno, CRM na ny fampiharana tranonkala izay eritreretinao. Zava-misy azo tsapain-tanana izany, Mono dia setroka efa amidy efa ela ary mbola voafetra ho an'ny vondrom-piarahamonina misy azy.
Raha misy zavatra mampiavaka ny F / LOSS, dia ny fahaizan'ny mpamorona izay tsy azonao amidy resaka tsy misy dikany amin'ny teny fotsiny fa tsara - avelako ho an'ireo 'mpamorona' izay mampiasa ny teknolojia Microsoft '-, raha Mono Tena ny fahagagana lazainy fa efa nanjary be mpampiasa amin'ny karazana tetikasa 'multiplatform'.
Ary indray, ny 'cross-platform' mamy amin'ny maha-fampiharana eo an-toerana dia lainga, ny tena fiheverana ny cross-platform dia eo amin'ny tranonkala.
Raha toa ka Mono no lazainy dia maninona raha tsy mandahatra programa sy lalao lehibe ao amin'ny C # hanararaotana ny avo telo heny amin'ny vidin'ny tsena fa tsy sehatra tokana?
Rajako? Tsia, misaotra, avelao izy hihanika ilay hazo nianjerany.
Voalohany, ny C # dia be mpampiasa kokoa noho ny python manerantany, na dia kely aza
Faharoa, navelako ireo rohy miaraka amin'ireo fahazoan-dàlana etsy ambony ary nanazava tsara aho, ka raha te-hikapoka ny varavarana amin'izay voasoratra ianao dia tohizo ...
Java crappy raha ny fahombiazana no fiteny faharoa ampiasana indrindra, tsy misy dikany ny fanjohian-kevitrao. Sahala amiko ny ilazako hoe "RAHA tsara ny Linux hoy izy ireo dia hampiasain'ny 90% amin'ireo mpampiasa birao, fa ny fomba fampiasan'ny 1/2% azy dia banga."
Ary farany, mpandraharaha maro no tsy miraharaha akory ny hevitra fanaovana rindran-tsampona, ary raha manao izany izy ireo dia hataony amin'ny Java.
Tsy tokony etika izany, fa miaraka amin'i C "michi" dia afangaro aho. Aleoko kokoa miasa miaraka amin'i Java mastodonted na ilay C ++ mahafinaritra (na dia tamin'ity taona ity aza izy ireo dia nampianatra ahy C # niaraka tamin'ny Visual Studio misy demonia arivo.
Miala tsiny @ eliotime3000, fa mandraka androany tsy mbola nahalala fampiharana java ho an'ny birao miasa haingana be aho…: /, amin'ny c +++, mazava ho azy fa tsara kokoa, saingy hitako fa tena sarotra izany.
Fantatro ianao, satria niaraka tamin'ny Java, nanao programa aho ary loza ny vokany. Raha ny C ++ dia tiako noho ny fahasarotany sy ny fomba anaovany azy io.
Na izany na tsy izany, miasa miaraka amin'ny teknolojia avy amin'i Microsoft, indrindra raha mampiasa Visual Studio .NET ianao.
Ed dia hoy izy:
1) Nahita ny kaontinao tao amin'ny Phoronix aho
2) Tiobe dia tsy azo ampiasaina ho referansa.
3) Tiboe sa TIOBE?!
Mamaly an'i Ed
Manomboka amin'ny famaliana anao toy izao aho:
«Voalohany, ny C # dia be mpampiasa kokoa noho ny python manerantany, na dia kely aza
Lojika tokoa raha jerena fa vetivety ihany dia tena efa zatra i Python ary efa nanelingelina nandritra ny fotoana kelikely i M $.
"Faharoa, navelako ireo rohy miaraka amin'ireo fahazoan-dàlana etsy ambony ary nanazava tsara aho, ka raha te-hikapoka ny varavarana amin'izay voasoratra ianao dia tohizo ..."
Ny fanboyism anao miaraka amin'ny Micro $ matetika dia tsy misy fetrany, sa tsy izany?
Mono (kinova 1.1.10) dia iray amin'ireo fonosana rindrambaiko izay ampanantenain'ny mpikambana OIN fa tsy hampiasa ny patantony.  Version 1.1.10 dia tamin'ny 2005.
Tamin'ny volana novambra 2010 dia nividy patanty 882 avy tao Novell i Microsoft (toy ny ampahan'ny ampahany amin'ny fivarotana lehibe kokoa izay nividianan'ny Attachmate ny ankamaroan'ny Novell). Mety nanjary nalemy ny OIN io. (Afaka manampy ve ianao? Tsy fantatra ny vokatr'izany. Tonga soa eto ny fampahalalana: Novell # Mahatonga_tsy_ny_Mety.3F) »
Na dia marina aza fa mifarana io fehintsoratra io ihany:
«Microsoft dia mety tsy nahazo patanty mety hampidi-doza ho an'ny mpampiasa Mono. Voalohany, efa nanana patanty .Net i Microsoft, ka raha manana i Novell dia ho ambim-bava fotsiny izany. Faharoa, toa ny fampanantenan'ny patanty Microsoft dia mihatra amin'ny patanty vao azony. Noho ireo antony roa ireo, ireo patanty vao nahazoana dia mampidi-doza toy ny patanty efa nananan'i Microsoft ihany, ka ambim-bava fotsiny izany. »
Tsy mazava ny fisian'ny fivoarana vaovao .NET _SI_ hozahin-tahaka amin'ny manaraka ka hanararaotra am-pahombiazana ireo mpamorona C # amin'ny baolina.
Modely -deiabolic- tsotra izay voaporofo fa manampy tokoa.
Tsy izany ihany fa hoy ny lahatsoratra wikipedia momba ny Silverlight / Moonlight:
«Fampiharana open source an'ny Silverlight, antsoina hoe Moonlight, dia tafiditra hatramin'ny Mono 1.9.  Moonlight 1.0, izay manohana ny API Silverlight 1.0, dia navoaka tamin'ny 20 Janoary 2009. Moonlight 2.0 dia manohana an'i Silverlight 2.0 ary ireo fiasa sasany an'ny Silverlight 3.0.  Ny famoahana mialoha ny Moonlight 3.0 dia nambara tamin'ny volana febroary 2010 ary misy fanavaozana ny fanohanan'ny Silverlight 3. 
Nilaozana ny tetikasa Moonlight tamin'ny 29 Mey 2012.  Araka ny voalazan'i Miguel, anton-javatra roa no nanidy ny hiafaran'ilay tetikasa: Microsoft nanampy «fameperana artifisialy» izay «… nahatonga azy io ho tsy misy ilana azy amin'ny fandaharana amin'ny birao…», ary ny teknolojia dia tsy nahazo vahana tamin'ny tranonkala. »
ny olana amin'i Micromierda malalanao dia ny ahafahan'izy ireo mandaka ny solaitrabe rehefa antsoina amin'izy ireo toa ny nataony tamin'i Silverlight.
Miankina amin'ny volavolan-kevitry ny orinasa BITTER CORPORATION araka ny tantara dia MICROSOFT FA TSY MISY FIOMPIANA FAMPANDROSOANA OPENORISY HITSIPIKA NY TAPOTRANA roa.
«Famintinana: nofoanana ny Mono ao amin'ny FOSDEM ary matetika dia tsy misy fandrakofana Mono amin'izao fotoana izao»
Inona no ilaina amin'ny fampiasam-bola amin'ny tetikasa maty na amin'ny fahalianana kely dia kely avy amin'ireo mpamorona mahay eo amin'ny lampihazo izay manimbolo hatramin'ny voalohany ary manana Ballmer miakanjo toy ny mpanentana mitsambikina ary miteny hoe "Mandehana Mono, Mandehana!"? Iza no mahatsikaiky izany!? Ah eny, pandev92, marina.
Ny Mono dia azo tsaboina toy ny tetik'asa Microsoft:
«Ummary: Miaraka amin'ny zon'ny mpamorona, patanty ary fahazoan-dàlana an'ny Microsoft ao Mono, ary koa ny CEO izay niasa ho an'ny Microsoft sy ny fanampiana ara-bola avy amin'ny Microsoft veterans, dia tsotra ny mandray an'i Mono ho zavatra hafa ankoatry ny fanitarana an'i Microsoft
Samy tsy mamoaka vaovao intsony na i Mono na i Miguel de Icaza. Angamba noho ny resaka fiainam-pianakaviana dia nandao ny sehatra ho an'ny besinimaro ity farany ity ary taorian'ny nahazoany orinasa vaovao, Xamarin, dia nahazo famatsiam-bola avy amin'ny VC veterans an'ny Microsoft, azo antoka ny mieritreritra fa ny tombontsoan'ny Microsoft / ny mpitarika dia handova andraikitra bebe kokoa amin'ity tetikasa ity. Izy io dia manampy amin'ny openwash .NET ary mody hoe cross-platform izany. Moonlight nanao toy izany koa ho an'ny Silverlight. Araka ny filazan'i Richard Hillesley azy tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, Microsoft dia tafiditra bebe kokoa ankehitriny. Raha hanonona ny tsanganana: "Microsoft dia nanome famporisihana ho an'i Mono tamin'ny fahalalàny fa ny tetikasa dia nanampy tamin'ny fanaparitahana ny teny sy nitondra ireo mpamorona tao amin'ny vala Microsoft. Marina ihany koa fa olona marobe ao amin'ny Microsoft no tena liana tamin'ny fampiroboroboana ny hevitra hoe 'loharano misokatra', mazàna misy kofehy mifamatotra, ary i Mono dia nanome fahatokisana ny filazan'i Microsoft fa ny teknolojia dia sehatra maro, azon'ny mpamorona rindrambaiko maimaimpoana. ary 'ampahany amin'ny tranonkala misokatra'. »
Debian GNU / Linux farany nametraka gnote rehefa nesorina ny mono:
Fehiny: Fanapahan-kevitra mahaliana avy amin'ireo mpamorona / mpanera Debian, izay manampy ireo izay mandà sy mamoaka an'i Mono
Na dia mampiditra ny GNU + Linux ho an'ny ortho aza i Debian, dia mbola tompon-daka amin'ny fanaparitahana ireo rafitra miasa malalaka sy manerantany ary tsy maintsy arovana mandra-pahafatiny.
Fampiharana desktop Java mihazakazaka ve? MuCommander, mandehana amin'ny google. Haingana be hoy aho.
Azo antoka, amin'ny famakiana faharoa dia ho azonao ny zavatra nosoratako, manasa anao aho. Raha mbola tsy azonao atao ny mandika azy dia ampahafantaro ahy ary hazavaiko amin'ny antsipiriany aminao izany.
"Ary farany, mpandraharaha maro no tsy miraharaha akory ny hevitra fanaovana rindran-tserasera, ary raha manao izany izy ireo dia hataony amin'ny Java"
JEREO, MBOLA MAZAVA: MANTRA an'i micrhhit rehefa nitondra .NET mankany GNU + Linux dia nampiseho mazava tsara fa ny fivoarany dia (amin'ny feo http://goo.gl/hDqLwY) PLATFORM MULTI.
Ka inona no resahinao?
Raha tianao i Microsoft ary mahasambatra anao izany ... tsara, tongasoa, fohy ny fiainana, raha tianao ... izany ... eny, any ianao, ny fiainanao, fa farafaharatsiny nivoaka avy tao amin'ny arimoara aho fa tsy manafina ny fihetseham-ponao amin'ny tohan-kevitry ny hafa.
Nah, fantatrao tsara fa avy any Python aho, ary tato ho ato dia maro ny php sy JS noho ny antony miasa, ny ahy dia fampandrosoana bebe kokoa amin'ny tranonkala (miaraka amin'ny foto-kevitra sy API sy JS ho an'ny asa tsy mifanaraka matetika, mahafinaritra be izany).
Ny lazaiko dia hoe, raha toa ka tsy maintsy ilaina ny mampiasa C #, ary koa tsy azoko lavina intsony ary toy izany, angamba mampiasa mono aho, saingy mbola tsy mahatsapa ho naman'io sehatra io ihany aho.
jhcs dia hoy izy:
Salama, maheno namana ve ianao, inona no atoronao ho hevitra momba ny programa izay mampiasa python sy qt? Miandry ny valinteninao haingana aho.
Mamaly an'i jhcs
Ampiasaiko amin'ny zava-drehetra ny Emacs ka tsy azoko lazaina aminao, fa ny fanontaniana fohy dia averin'ny masinina omnisensy haingo maromaro: http://lmgtfy.com/?q=ide+for+python+and+qt
Tena tsara, fa raha mampiasa Debian Stable (Wheezy) ny iray, dia mila ampiana ny backport ao anatiny /etc/apt/sources.list ity andalana manaraka ity (na amin'ny fanovana ny rakitra amin'ny GNU Nano na amin'ny fampiasana ny Loharanom-pifandraisana sy / na ny mitovy aminy) >>
Raha mampiasa Testing Debian sy / na tsy milamina ianao dia efa misy MonoDebelop.
Lewis dia hoy izy:
anarana tady = "mikasa";
// SNK tsikaritra.
Raha ny fanazavana, efa nisy nampiasa Vala-C na granite ve? (Ity no elementosOS)
Valiny tamin'i Lewis
Hahaha tratrao aho 😛
nquiroga dia hoy izy:
hahaha, eny hitako koa io
Mamaly an'i nquiroga
Tian'i ELAV fandaharana miaraka amin'i MONO C #.
ELAV dia mpanaraka mahatoky an'i Miguel De Icaza sy ny tetikasany MONO.
Noraisinao tamin'ny vavako izany, izany hoe, avy amin'ny rantsan-tànako .. U_U
Niaiky aho fa nalaim-panahy hianatra C #, satria ny sehatra NET dia mamela ny fiasa miaraka amin'ity fiteny ity ary afaka mamorona rindranasa birao mandeha amin'ny milina misy NET napetraka ianao, izany hoe mianatra fiteny iray manampy ahy hamorona programa izay mandeha 90% ny solosaina eto amin'izao tontolo izao dia manintona tokoa (Mazava ho azy fa maro ny kinova NET ary tsy maintsy apetrakao aloha mba hahafahanao mampiasa azy), mihoatra ny mianatra mandahatra programa ho an'ny 1% (XD miala tsiny linuxeros ). Java ihany koa dia manintona, satria mamela anao handrindra zavatra izay hiasa amin'ny 100% amin'ny solosaina eto ambonin'ny planeta (Tokony hametraka Java ianao ary hitahiry ny tsy fitovizan'ny kinova Java sy ny lafiny izay tsy mandeha amin'ny asa rehetra. rafitra) Ny safidy tsara indrindra dia toa an'i java. Na dia haingana kokoa noho ny Java aza ny NET, dia miitatra kokoa i Java. Aleo mankany Java. Ary koa, ny MONO dia tsy NET, ary tsy misy azo antoka fa hiasa amin'ny Windows izy io, avelao ny distro hafa.
Etsy andaniny, amin'ny archlinux, talohan'ity programa ity dia tsy mandeha. Hatramin'ny nanjary nalaza ny andohalambo dia nisy fandaharana misimisy miafina kokoa nanomboka.
Eo ambanin'io hevitra io ihany dia tsara kokoa ny mampiasa Python, izay miasa tanteraka amin'ny rafitra fiasa rehetra ary miankina amin'ny karazana fatorana ampiasanao azonao atao ny miasa haingana kokoa amin'ny fotoana iainan'ny Java.
Tena tsara i Python, saingy ao amin'ny fitantanana data dia tsy mahomby izy io, raha te hiasa python amin'ny MySQL ianao dia tsy maintsy mampidina mpampitohy izay tsy misy afa-tsy amin'ny maritrano 32-bit, noho izany dia mila mampiasa python 32-bit sy MySQL 32-bit ianao. . Avy eo mba hiasa izany dia tsy maintsy nanao dingana tena lehibe ianao. Python dia natao hiara-miasa amin'ny slqlite. Ary ny "orientation object" dia sangisangy, mazava ho azy fa mahafinaritra be ny mahazo programa desktop tsotra sy haingana, afaka 10 minitra miaraka amin'ny pyqt dia mahazo zavatra mahafinaritra ianao, tsy miloka amin'ny python amin'ny zavatra tena sarotra aho raha zavatra tsotra.
F'inona izany resahanao izany? ratsy ilay mpampitohy python ho an'ny MySQL? nanomboka oviana ianao no tsy mampiasa python? Hatramin'ny nahatongavan'ny pep 249 http://www.python.org/dev/peps/pep-0249 izay mifehy ny fifandraisana DB rehetra ao anaty dingana mitambatra amin'ny dingana telo ary miaraka amin'ny tsipika telo dia efa manana DB mandeha ianao.
Vazivazy "orientation object"? Ao amin'ny python ny zavatra rehetra dia zavatra iray raha te hampiasa ny base-nao ho toy ny zavatra ampiasainao ny MySqlAlchemy izay ORM, ary na ny fangatahana amin'ny datao aza dia raisina ho toy ny zavatra iray. Ity koa dia ampiharina ao Django sy ireo maodeliny.
Ary farany ny mpampitohy (Sarotra ny mametraka eo an-dàlana) dia mampiasa apt-get install python-mysql fotsiny, ary azonao atao izao ny manafatra MySQLdb, ary mamorona fifandraisana sy kursor.
Tsy lazaina intsony fa mahomby kokoa ho an'ny programmer ny miasa amin'ny PyQt na PySide noho ny Miasa amin'ny C ++ izay teratany QT, ao anaty stackover flow dia manana fifanakalozan-kevitra ianao hoe iza amin'ireo fiteny roa no misy vokatra kokoa , Tsy te-hilaza ny mazava eo aho.
Heveriko fa tokony hamaky kely alohan'ny hanomezana hevitra ianao fa tsy hilaza hoe ny namanao (taloha) dia sahirana tamin'ny fisintomana mpampitohy izay napetraka tamina apt, paman, yum ..
Tsy nanao azy ireo teo am-baravarankely aho fa nalefako tsy niova kaody, mametraka fotsiny ny fiankinan-dry zareo avy ary mametraka python, ary raha tsy manana apt ianao satria eo am-baravarankely ianao dia manana PIP ary azonao apetraka toy izao " python pip mametraka MySQL ", inona ny fahasamihafana lehibe amin'ny apt.
Raha tsy tianao ny mampiasa pip ianao dia manana azy amin'ny fomban'ny windows, eto dia samy manana mpampifandray ho an'ny 32bit ianao ary ho an'ny amd64 amin'ny executable.exe
efa nanao programa miaraka amin'ny python miditra amin'ny bd myslq ve ianao amin'ny fandresena? Tsy miresaka momba ny linux mihitsy aho, tokony hamaky tsara ny hevitro ianao satria tsy manome anarana an'i pheast mihitsy aho, na namana. Ha
Tsy anjarako ihany izany, ilay birao. Izay ahitanao ny herin'ny Python dia ao Django, ohatra.
Na dia mieritreritra aza aho fa nihatsara ny olana momba ny fitantanana angon-drakitra tato ho ato, dia tapaka tsy ho ao anaty lisitra intsony aho.
Ny herin'ny Python dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny famokarana mpamorona, amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fotoana natokana ho an'ny tetikasa, noho izany dia mihatsara ny kalitaon'ny kaody, manamora ny fikojakojana azy. Izany eo amin'ny sehatry ny fandraharahana dia mampitombo ny tombom-barotra amin'ny alàlan'ny fametahana vokatra eny an-tsena amin'ny fotoana fohy indrindra sy amin'ny kalitao faran'izay avo indrindra, miaraka amin'ireo mpamorona voatendry ho amin'ilay tetikasa.
Fetsy satroka ho an'ny orinasa sy ny mpandraharaha tsy ara-potoana.
Ary tsy miady hevitra amin'izany aho, fa tonga kosa ny olan'ny fampisehoana sy ny fiteny na fiteny hampiasana.
Python dia tena afaka mifanitsy amin'i Java amin'ny fotoana maharitra, saingy indraindray io famokarana io dia tsy manonitra ny fahaverezan'ny herinaratra omen'ny ohatra iray toy ny C ++ ohatra.
Ity dia iray amin'ireo olana
Mazava ho azy fa hiasa amin'ny windows izy io, ary tadidio foana fa amin'ny windows dia afaka mihazakazaka amin'ny .net kinova 1.0… ianao, hatramin'ny taona nahaterahan'i Kristy ahahah.
Moa ve tena miasa mitovy amin'ny java (kaody mitovy na aiza na aiza)?
Tsy tena marina fa tena mitovy, java dia manana sehatra malalaka kokoa.
Python? Ry zalahy, python dia apetraka fotsiny amin'ny solosaina ary dia izay. Na izany na tsy izany, ny tranomboky (toa ny Java) dia efa miasa ihany.
Raha ny marina dia tsy maintsy apetrakao amin'ny Windows fotsiny ianao satria tonga amin'ny alàlan'ny default amin'ny Linux sy OsX… sehatra io.
Nieritreritra aho fa mangataka C # ianao, mampitaha C # amin'ny java, aza mampitaha ny python mihitsy, fantatrao fa programa ao Python Nano aho. -.-
Izahay dia eo amin'ny pejy iray ihany, miloka Python amin'ny zava-drehetra aho, miteny toa an'i Google "Python aho rehefa afaka ary C ++ rehefa tsy maintsy".
Qt4. Mora izany. Ary avelao ny windowslerdos hitelina gidro foana.
Qyoto dia ahafahana mampivelatra ny rindranasa Qt mampiasa C #, na fiteny hafa .NET. Qyoto dia mampiasa SMOKE, ary manolotra fidirana amin'ny saika ny kilasy Qt rehetra. Maimaimpoana ary loharano misokatra miaraka amin'ny fahazoan-dàlana LGPL.
Eo anelanelan'ny mastodon Java sy ny gidro C #, mandeha amin'ny mastodon aho.
Azo atao ve ny mamorona rindranasa mampiasa endrika windows amin'ny linux miaraka amin'izany?
Eny fa ...
Toa vahiny amin'ny sehatra tsy Windows.
Tsy ilaina ny miady hevitra momba ny fiteny fandefasana programa fa izay ny tsiro raha tsara kokoa ny iray noho ny iray hafa afaka misafidy ny rehetra, manao fandaharana amin'ny java aho ary tsara kokoa raha miadana kokoa noho ny c ++ raha ny fanjifana fahatsiarovana no resahina. Fa tiako manokana izany. Heveriko fa ny iray amin'ny programmer dia manana ny fotopoto-pitsipika ao aminy fa raha te-hanao fanamby amin'ny tenanao ianao, ny zavatra tsara indrindra dia ny fahalalana farafaharatsiny farafaharatsiny tsirairay sy ireo izay tianao na mety hanana toe-karena bebe kokoa hianarana azy ireo tanteraka na hifehezana azy ireo raha azonao atao . Ny fiteny tsirairay dia manana ny mahatsara sy maharatsy azy. Python dia fiteny tsara fa amin'ny zavatra lehibe dia tsy ampy toy ny fiteny hafa izany. Ka miankina amin'ny filan'ny tena izany.
Fanandramana ratsy miaraka amin'i MonoDeveloppe ao amin'ny KDE, nianjera matetika izy ary tsapako fa tsy manome ny sakany hiara-miasa amin'ny ASP.NET amin'ny ambaratonga mora
(avelany hanao tranokala miaraka amin'ny ASP.NET ao amin'ny oniversite aho)
Tsy haiko raha nampiasa qtcurve ho an'ny lohahevitra ianao, satria fantatro ohatra fa bibikely ekena izany.
Raha nampiasa azy aho ary rehefa nanomboka ny hafatra dia nampitandrina ahy mazava tsara fa, ovao ho oksizenina ny qtcurve. Ny olana izay natolotra ahy dia ny famenoana ny asp
Noho ny fahalianana dia te-hametraka monodevelop amin'ny ppa napetrakao sy ny fonosana aho
tsy hita ao aminy ny monodevelop-current, tsy toy ny monodevelop-lastest
C # syntax mamely ny C, C ++, ary ny Python.
Afaka nanamarina izany aho.
Mampiasa Mono Gtk sy VALA Gtk.
C # no zavatra akaiky indrindra an'i C fa nivoatra.
Niara-niasa tamin'ny C ++ aho ary matetika ny syntax dia sarotra tokoa raha tsy manana boky torolàlana ianao, amin'ny lafiny maro dia tsy misy itovizany amin'ny C amin'ny syntax.
C # dia tsy mila rakitra lohateny toy ny (C sy C ++)
Ny hafainganan'ny C # sy VALA dia mitovy amin'ny an'ny C rehefa manatanteraka.
Miaraka amin'ny C # dia mamonjy fotoana ianao rehefa mandahatra ny programa satria ny syntax dia tsotra be.
Misaotra ny atrikasa, manantena ny lohahevitra manaraka aho. Manantena aho fa hianatra fiteny fandaharana indray mandeha 😀
Raha afaka nanao zavatra nanohitra an'i Mono i Microsoft dia efa nanao izany sahady, azonao antoka izany. Androany, tsy manan-doza ianao ankoatry ny fampiasana Java na Qt.
Maxiro dia hoy izy:
Tena tsara! fa manana fanontaniana aho, tsy manana endrika mahafatifaty toa ny studio visual na qt ve ny mpamorona varotra?
Valiny tamin'i Maxiro
Mazava ho azy raha xdd, ohatra amin'ny ide mitovy ao amin'ny gtk xd ...
Bryan Rodriguez dia hoy izy:
Ny fametrahana dia tsy mitovy amin'ny fametrahana azy ao amin'ny lesona. Misy zavatra izay tsy nazava tamiko toy ny fiasa rehetra miseho amin'ny voalohany fa tsy haiko, tsy matihanina amin'ity fiteny ity aho.
Valiny tamin'i Bryan Rodríguez
Lol, ahoana no tsy itoviana ny fametrahana? Raha tsy hitanao ny fonosana monodevelop dia ampiasao ny synaptic, tadiavo izany ary kitiho indroa.
Efa afaka nametraka azy aho fa tsy maintsy nitendry baiko vitsivitsy tao amin'ny terminal fa misaotra betsaka.
.NET amin'ny Linux dia adala iray fa ny Icaza hdp ihany no tonga
Te hahafantatra ny fametrahana ny rafitra .Net aho
Raha ny marina dia avy amin'ny mpankafy MicroShit ity lahatsoratra ity.
Cross-plate C #? Inona ny helo an'ity lehilahy ity ao amin'ny ati-dohany? Manasa anao aho hanangona Banshee ary hijery ireo lahatahanao feno rakitra .dll sy .exe roa avelako ny rohy http://banshee.fm/.
Ny C # dia tsy sehatra an-tsaha ary tsy manao majika ny tetikasa mono, ny tena ataony dia ny mamela ny alàlan'ny tranombokiny aorian'ny fananganana ny .exe dia azo atao izy avy eo ilaina ny fametrahana an'i Mono mandrakizay, raha tsy izany tsy misy azo tanterahina na dia aorian'ny Rehefa nanangona ny programa izy, raha tsy nilaza zavatra mifanohitra amin'ny tetik'asa Mono i Microsoft dia satria manana fahalianana mazava be izy ary ho hitanao ny zava-nitranga tamin'i Xamarin satria te hanitatra ho tombontsoany manokana io orinasa io fa tsy ho tombontsoan'ny mpahay siansa solosaina.
Rohy Banshee Archlinux: https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/banshee/
Manasa ny tompon'ny paositra aho handinika ny fiankinan-doha sy ny atin'ny fonosana.
Desktop Linuxero tsara indrindra: Oktobra 2013